Ei Maung's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
30, MaleYangonMyanmar Share on Facebook
Blog Posts (62)Discussions (506)EventsGroups (15) Ei Maung's Likes Ei Maung's Friends
View All Ei Maung's Groups
University of Computer S…
Ei Maung's Discussions
Englisn စာလုံးပုံစံ ဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေနဲ့ Myanmar3
Started this discussion. Last reply by sawsan May 22, 2011. Poll Results
Started this discussion. Last reply by Myint Kyaw Thu Jan 31, 2011. အောက်တန်းကျယုတ်ညံ့သည့် လုပ်ရပ်များကို ရှုတ်ချလိုက်ပါသည်။
Started this discussion. Last reply by Mio Feb 8, 2011. View All
From haymar hlaing
Project Manager at Fairway Web
kglay@it joined Ei Maung's groupAsk MITPAsk your problems in daily use of Computer and Internetsuch as Virus Problems,Installation Problems, Windows Problems,Hardware Problems and etc...See MoreJun 23 178
flyingman joined Ei Maung's groupAsk MITPAsk your problems in daily use of Computer and Internetsuch as Virus Problems,Installation Problems, Windows Problems,Hardware Problems and etc...See MoreJun 10 178
yehtutwin joined Ei Maung's groupAsk MITPAsk your problems in daily use of Computer and Internetsuch as Virus Problems,Installation Problems, Windows Problems,Hardware Problems and etc...See MoreJan 8 178
Hsatpaing joined Ei Maung's groupAsk MITPAsk your problems in daily use of Computer and Internetsuch as Virus Problems,Installation Problems, Windows Problems,Hardware Problems and etc...See MoreNov 22, 2013 178
chan myae san hlaing joined Ei Maung's groupRuby and Rails"Ruby on Rails isabreakthrough in lowering the barriers of entry to programming.Powerful web applications that formerly might have taken weeks or monthsto develop can be produced inamatter of days."-Tim O'ReillySee MoreNov 17, 2013 1
mmmoe joined Ei Maung's groupAsk MITPAsk your problems in daily use of Computer and Internetsuch as Virus Problems,Installation Problems, Windows Problems,Hardware Problems and etc...See MoreSep 5, 2013 178
Saw Nerdar joined Ei Maung's groupAsk MITPAsk your problems in daily use of Computer and Internetsuch as Virus Problems,Installation Problems, Windows Problems,Hardware Problems and etc...See MoreAug 25, 2013 178
Eilay liked Ei Maung's blog post Professional ျဖစ္လိုသူမ်ားအတြက္ အင္တာနက္မွ ေလ့လာနည္းမ်ားAug 13, 2013 More... RSS
Fairway Web Development Co., Ltd.
Ei Maung's Blog
DevCon 2011 - Yangon
Posted on August 5, 2011 at 6:30pm 1 Comment
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံး Developer Conference ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၂၀) ရက်နေ့နဲ့ (၂၁) ရက်နေ့တို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) က ဦးဆောင်စုစည်းပေးတဲ့ Conference ဖြစ်ပါတယ်။ Software Developer တွေနဲ့ MCPA EC တွေ ပူးပေါင်းပြီး DevCon 2011 - Yangon Working…
Continue မြန်မာနိုင်ငံမှာ စုစုပေါင်း Programmer အရေအတွက် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ?
Posted on March 4, 2011 at 11:36am6Comments
အတားအဆီးအထပ်ထပ်ချမှတ်ထားတဲ့ ပြေးပွဲပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ စမှတ်ကနေ ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက် ကြားထဲမှာ ကျော်ဖြတ်ရမယ့် အတားအဆီးတွေ သတ်မှတ်ထားတယ်။ ကျော်တက်ရမယ့် တံတိုင်းတွေရှိမယ်၊ လှုပ်ယိုင်နေတဲ့ကြိုးတံတားတွေရှိမယ်၊ ကူးဖြတ်ရမယ့် ရေအိုင်တွေရှိတယ် စသဖြင့် အတားအဆီး ဆယ်ဆင့်ရှိတယ် ဆိုပါစို့။အတားအဆီးတစ်ခုဟာ အဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်လာတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်သူ ထက်ဝက်ကို ရှေ့မဆက်နိုင်အောင် တားဆီးထားနိုင်တယ်လို့ ယူဆထားမယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင်သူ (၁၂) ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင် (၆) ယောက်လောက်က… Continue မြန်မာစာသည် ဒို့စာ၊ မြန်မာစကားသည် ဒို့စကား။
Posted on February 23, 2011 at 12:30pm2Comments
ယနေ့ခေတ်ကဲ့သို့သော Globalization ခေတ်တွင် အဂ်စာ၊ အဂ်လိပ်စကားနှင့် အခြား နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများ၏ လွှမ်းမိုးမှုများကို ငြင်းဆန်ရန် ခက်ခဲလှပါသည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေတွင် မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကားဟူ၍ ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် နေရာတစ်ခုကျန်ရှိနေစေရန်မှာ များစွာ အရေးကြီးလှပါသည်။ မြန်မာစာ မြန်မာစကား၏ ဟူ၍ ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် နေရာတစ်ခုကျန်ရှိနေစေရန်မှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးအားလုံး၏ တာဝန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ပေါ့ဆကြလျှင် နောင်တစ်ချိန်တွင် မြန်မာစာ မြန်မာစကားဟူသည် လုံးလုံး ပျောက်ကွယ်သွားမည်ကို စိုးရိမ်ရပါသည်။… Continue ကိုယ်ပိုင်အမည်နဲ့ Web Site တစ်ခု တင်ကြမယ်
Posted on February 16, 2011 at 1:06pm 14 Comments
အင်တာနက်မှာ ကိုယ်ပိုင် Web Site တစ်ခု တင်နိုင်ဖို့အတွက် လုပ်ရမယ့် အဆင့် (၄) ဆင့် ရှိပါတယ်။
Domain Name (လိပ်စာ - ဥပမာ - www.example.com) တစ်ခု Register လုပ်ရပါမယ်။
ကိုယ်ရေးထားတဲ့ Web Site File တွေ တင်ထားဖို့အတွက် Hosting တစ်ခု ယူထားရပါမယ်။
လိပ်စာနဲ့ Hosting ကို ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် DNS Setting လုပ်ပေးရပါမယ်။
ရေးထားတဲ့ Web Site File တွေကို အသင့်ယူထားတဲ့ Hosting မှာ Upload…
Continue Test Driven Development အကြောင်း သိကောင်းစရာ
Posted on February 6, 2011 at 1:00pm4Comments
ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့က MCPA Meeting Room မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို တက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Event မှာ Singapore နဲ့ Australia မှာ Programmer အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ Raymond Maung ခေါ် ကိုရန်နောင်က Test Driven Development (TDD) အကြောင်း သိကောင်းစရာများကို ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။Agile Practice တွေထဲက တစ်ခုလို့ ယူဆထားတဲ့ TDD ကို အရင်ကတည်းက စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ Production Code နဲ့အတူ Test Code ကို တစ်ခါတည်းရေးရမယ်ဆိုတဲ့ Concept ကို ကောင်းကောင်းနားမလည်သလို၊ အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လဲ… Continue AddaBlog Post
At 1:39am on January 17, 2013, Julianna said… Hpy New Yea!Am Juliana,I really want to haveagood friendship with you.i have something special i want to discuses with you. You can get back to me,directly to my e-mail. juliana4love_vaye@yahoo.com At 4:56am on August 23, 2011, Dr.Note said… ကျွန်တော်emailကိုinviteလို့ရမလား။ကွန်ပြူတာနဲ့ပတ်သတ်တာတွေမေးစရာရှိလို့ပါ။ At 10:38am on August 17, 2011, jokerboy said… ေရွာ႕ကပ္ေလးခုနဲ႔ watermark ဆိုတဲ႔ ဗိုင္းရပ္ကို ဘယ္လိုသတ္ရမလဲ
ေျပာျပေပးပါအုန္း At 11:15am on May 4, 2011, nway nway said… Hello Ko Ei Maung
May i know web java Development time table and frees? At 8:19am on March 11, 2011, Ch@n said… Hello Ko Ei Maung
ဥပမာ Stick4GB ဆိုပါေတာ့ အဲ့တာကို 8GB ေျပာင္းခ်င္တယ္
8GB ဆို တာ 4GB ဘဲးေနာ္ Property ထဲးကၾကည့္ရင္ေတာ့ 8 GB
ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ 8GB အတုေပါ့ ဟဲး..ဟဲး
အဲ့လိုမ်ိဳးလုပ္တာသိရင္ေျပာျပၾကည့္ေလဂ်ာ....... At 1:03pm on January 18, 2011, ချစ်တတ်သူ said… I send u message. please reply me na. At 10:45pm on January 03, 2011, Aung Aung gave Ei Maungagift…High Teaအမောပြေလေး သောက်လိုက်ပါဦးဗျာ . . .
အပြင်မှာ လက်ဖက်ရည် လာမတိုက်နိုင်တော့ ဒီမှာပဲ Virtual Tea တိုက်တော့မယ် . . . :)From the Gift Store At 2:06pm on September 25, 2010, ချစ်တတ်သူ said… ကိုအိေမာင္..
durosoft က web နဲ႔ပတ္သက္တာေတြ သင္တန္းတက္ခ်င္ပါတယ္... သင္တန္းခ်ိန္ေလးရယ္ fees ရယ္ အေၾကာင္းျပန္ေပးပါလားခင္ဗ်ာ.. ပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က နယ္က ဆိုေတာ့ အဆာင္လာေနရမွာပါခင္ဗ်ာ... email က marnamoehtet@gmail.com ပါခင္ဗ်ာ At 11:44am on August 24, 2010, Terminator gave Ei Maungagift…Red WineFreelance နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ေဆာင္းပါးကိုႀကိဳက္တယ္ဗ်ဳိ႔...
Red Wine ေလး၀ယ္ေပးလိုက္တယ္ဗ်ဳိ႕...From the Gift Store At 12:36pm on May 29, 2010, Aung Aung gave Ei Maungagift…Red RibbonRed RibbonFrom the Gift Store No comments yet!